Carro ka dhalatay askar Kenyan ah oo lagu dilay Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
Carro ka dhalatay askar Kenyan ah oo lagu dilay Soomaaliya
Boqolaal askari oo Kenyan ah ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo 2011, iyagoo lagu weeraray saldhigyadda Ceel-Cadde iyo Kulbiyow.
NAIROBI, Kenya - In ka badan 10 askari oo ka tirsan Ciidamada Kenya ayaa lagu dilay Isniintii qarax miino oo wadada dhinaceeda lagu aasay gudaha gobolka Gedo, sida ay sheegeen qoyska mid ka mid ah askarta dhintay.
Waxaa qarax miino lagula eegtay degaanka Gherille xili ay biyo kasoo dhaansadeen gudaha Kenya, oo usoo gudbeen dhinaca saldhigooda ku yaalla Koofurta Soomaaliya.
Dowladda Kenya way ka aamustay askarta laga dilay, iyadoo aysan ka hadlin dhimashadooda oo aan wax qiimo ah siinin - taasoo ka careysiisay Prof J Ole Kiyiapi, oo walaalkiisa ka yar, Johnson Olemoi Kiyiapi, uu ka mid ahaa kuwa la dilay.
Prof Kiyiapi, oo hore u ahaa musharax madaxweyne, ayaa BBC-da u sheegay in uu aad uga xun yahay mas'uuliyiinta in ay sharfaan geerida geesiyaasha.
Wuxuu sheegay in qoysku ay ogaadeen geerida walaalkiis ka yar Talaadadii ka dib markii Saraakiisha Ciidamada ay booqdeen gurigooda miyiga gobolka Rift Valley.
Tani waa waxa iga caraysiiyay oo murugooday. Raggan dhalinyarada ah waxay bixiyeen qiimaha ugu sarreeya ee ay dalkooda ku difaacayeen, laakiin waxaad mooddaa in dowladda aysan wax qiimo ah ugu fadhin nolosha askarteeda,' ayuu Kiyiapi u sheegay BBC-da.
U fiirso sida Maraykanku ula dhaqmo askartooda ku dhintay dagaalka, waa la ixtiraamaa waana la aqoonsan yahay qiimahooda, laakiin halkan dawladda iyo militariga Kenya way ka aamusaan askarta la dilo.
Wararka ku saabsan dilka askarta Kenyanka ah waxaa laga ogaadey warbaahinta maxaliga ah ee Soomaaliya Isniintii, iyadoo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dagaalyahannada Al-shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
Shan askari oo kale ayaa lagu soo waramayaa in dhaawacyo halis ah ay soo gaareen kadib markii gaari ay wateen uu jiiray walxaha qarxa xili uu marayay wado ku taalla gobolka Gedo oo ku dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Ciidanka Kenya waxay qeyb ka yihiin 22,000 oo askari oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya, kuwaasoo dowladda federaalka ah ka caawiya la dagaalanka kooxaha hubeysan, gaar ahaan Al-Shabaab.
Boqolaal ka mid ah askarta Kenya ayaa ku dhintay dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab – mid ka mid ah weerarkii ugu dhimashada badnaa ayaa dhacay bishii Janaayo ee sanadkii 2016-kii markaasoo maleeshiyaad hubeysan ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Cade ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Khubarada iyo dowladda Soomaaliya ayaa ku qiyaasay in dhimashada Kenya ay gaareyso boqollaal, balse lixdii sano ee la soo dhaafay ilaa hadda lama hayo tiro rasmi ah. Saraakiisha militeriga marar dhif ah ayay soo saareen tirooyinka khasaaraha.
Kenya ayaa markii ugu horreysay ciidamadeeda u soo dirtay Soomaaliya sannadkii 2011-kii kaddib markii xoogagga Al-shabaab ay afduubteen laba dalxiisayaal ah iyo shaqaale u shaqeynayay MSF gudaha xerada Dhadhaab. 2012 ayay Ciidanka Kenya si rasmi ah ugu biireen AMISOM, waxana qaabilsan yihiin degaanada Jubbaland.
Comments Topics: al-shabaab kenya soomaaliya